खाना र पिउने, रक्सी र आत्माहरू
जिन गेहूं र कनिपर बेरीको अल्कोहलहरु को आसन को आधार मा एक लोकप्रिय अल्कोहल पेय हो , यो यसको कारण हो कि यो एक विशिष्ट स्वाद र सुगंध प्राप्त गर्दछ। निर्माण पछि यो विशेष रूप देखि बनाइएको ओक बैरल मा एक निश्चित समय को लागी राखिएको छ, ताकि दूध एक धनी सुगंध र थोडा अँध्यारो रंग हो। सामान्यतया पेयले 35 देखि 45 डिग्रीको शक्ति पाउँछ। दुई मुख्य अवयवहरूको अतिरिक्त, यसको घटकहरूको संख्या 120 सम्म हुन सक्छ। यो एनि, नींबू छील, दालचीनी, धनी, र धेरै अन्य जडीबूटी र मसाले। तथ्यको बावजुद जिनको जन्मस्थान होल्यान्ड हो, यो त्यहाँ थियो कि यो पहिलो 17 औं शताब्दीमा उत्पादन गरिएको थियो, यो सबैभन्दा ठूलो लोकप्रियता यो इंग्ल्याण्डमा अधिग्रहण भयो। दाँत पिउन कसरी, साथै सबै प्रकारको किला, किला र यसको कष्टमा लोकप्रिय ककटेलहरू कसरी मिश्रण गर्ने, हाम्रो लेखमा पढ्नुहोस्।
पेय को मुख्य किस्महरु
डच र ब्रिटिश गिनमा पेयको एक सशर्त विभाजन छ। पहिलो जिलिस्को निकासी र पछिल्ला भिसाको थप संग जर्को अल्कोहल भत्किएको द्वारा प्राप्त गरिन्छ। र सबैभन्दा लोकप्रिय अंग्रेजी गिनिस गेहूं कच्चा माल र सबै प्रकारका additives प्रयोग गर्दछ। पारंपरिक, यो जेनी तीन प्रकारहरु मा विभाजित छ: प्लिमाउथ जिन - सर्वोत्तम पेय, यो केवल गेहूं देखि उत्पन्न हुन्छ; लन्डन सूखी जिन - धेरै बलियो, र सबै भन्दा सक्रिय रुपमा उत्पादन गरिएको; र अन्तिम एक पहेंलो (पहेंलो गिइन), सबैभन्दा महान् विविधता हो, यसको निर्माण पछि यसलाई गीर स्वाद र सुगन्ध प्राप्त गर्न जर्ज भित्रबाट ओक बैरलमा राखिएको छ। दाँत पिउन कसरी, साथसाथै मिक्स ककटेलको आधारमा, तपाईले थप जानकारी पाउनुहुनेछ। सम्झनुको मुख्य कुरा यो हो कि शराबको अत्यधिक खपत, विशेषतया यस्तो बलियो, तपाईंको स्वास्थ्यलाई हानि पुऱ्याउन सक्छ।
यसको शुद्ध रूपमा गिन कसरी पिउन सकिन्छ
पहिले नै माथि उल्लिखित, यस पेयमा शराबको एक उच्च प्रतिशत र एक विशिष्ट स्वाद र सुगंध छ, त्यसैले यसको शुद्ध रूप मा यो अत्यन्तै मात्र प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईं अझै पनि कुनै पनि अशुद्धता बिना गिनको स्वादको आनन्द उठाउन चाहानुहुन्छ, यो सानो सानो दृश्यहरू (30 वा 50 मिलीलीटर), चिसो हुन्छ। चश्मेको रूपमा, साधारण चश्मेहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जसमा हामी प्रायजसो वोडाका थियौ। तर यो प्रयोगको लायक छ भने आज आज 13 भन्दा धेरै मशहूर ककटेलहरू छन् र यसको सबैभन्दा लोकप्रिय "Gin-Tonic" सबैभन्दा लोकप्रिय समावेश छ। आउनुहोस् कि तपाईं कसरी कसैलाई मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ।
दाँत र टान्को कसरी पिउने, साथसाथै यो शराबमा आधारित ककटेलका अन्य विकल्पहरू
हरेक पल्ट जो एक पल्ट वा रेस्टुरेन्ट मा भएको छ, निस्सन्देह, शराब मेनू मा "Gin-Tonic" मा आधारित सबै भन्दा लोकप्रिय संयोजन को रूप मा। त्यसैले यदि तपाईंसँग आफ्नो घर पट्टीमा यो शराबको बोतल छ भने, गिन गर्डन्स (वा कुनै अन्य) पेन्सनको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्, सबै भन्दा प्रसिद्ध, स्वादिष्ट र ताजा तातो ककटेल बनाउनुहोस् । उनको लागि तपाईंलाई चाहिन्छ:
50 मिलीलीटर जिन गर्ड्सन वा कुनै अन्य;
नींबू वा कागको सानो टुक्रा;
प्रक्रिया लगभग एक मिनेट लाग्छ: कम गिलासमा, आधा भरी आधा, लेमन को टुक्रा राख्नु, रक्सी पकाउनुहोस्, त्यसपछि टन्निक को एक भाग जोड्नुहोस् र एक छड़ी संग हलचल। भयो। जुत्ताको साथ अन्य ककटेलका लागि अन्य लोकप्रिय व्यञ्जनहरु मध्ये, तपाईं "गिम्लेट" को पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि उनको उपाय छ:
सोडा पानीको 1 भाग (रूसमा लोकप्रिय छ "Schwepps");
सानो चम्मच सिरप (1-2 तेर्सो);
और, बेशक, बिन बंबई नीलमियर।
यो ककटेल कसरी पिउन र मिश्रण गर्ने? सजिलो छैन। आवश्यक मात्रामा चाइप आवश्यक मात्राको साथ मिश्रित दुई टुक्रा टुक्रा, बर्फ देखि आफ्नो स्वादमा भरिएको गिलासमा राख्नुहोस्, र सोडा पानीको माथि माथि , त्यसपछि एक छड़ी संग हलचल। तपाईले देख्नुभयो, चीले केहि असामान्य अवयवहरूको संयोजन आवश्यक छैन, र प्रायः यो vermouths, टनिकिक्स सँगै संयुक्त हुन्छ, र नींबू र जैतून पनि थप्नुहोस्। सूचीको उचाइको बावजूद, ककटेल धेरै फरक हुन सक्छ: मीठो र तीव्र, बलियो र धेरै धेरै। प्रयोग गर्दै, तपाईं एक संयोजन पत्ता लगाउन पक्का हुनुहुन्छ जुन तपाईले स्वाद हुनेछ।
वाइन: विवरण र फोटो
तपाईंको शरीरमा के हुनेछ यदि हरेक साँझ तपाईं वाइन पिउनुहुन्छ?
"अनी" - अविश्वसनीय स्वाद संग सिग्नेक
जामुन देखि घर को शराब को साबित विधि
एक जना दाखरस कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
Rastorguev Nikolay: जीवनी जनता कलाकार
सुरक्षित रंग र html
अदालत मा cadastral मूल्य चुनौतीपूर्ण। कसरी cadastral मूल्य लडने एक मुद्दा फाइल
प्रतिबिम्बित - यो छ ... चिन्तनशील मानिसको - के छ?
Kalina सेडान। विवरण र कार ट्युनिङ